Dhamma Video - Browse Media - High Resolution
Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ကာတွန်းစာအုပ်/ဂျာနယ်/စသည့်... Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ Cartoon - ကာတွန်းစာအုပ်/ဂျာနယ်/စာစောင်/စသည့်... Dhamma Photos - Dhamma Picture - Dhamma Paint - ဓမ္မဓါတ်ပုံများ- 360 Degree Photos Panorama - ၃၆၀ ဒီဂရီ ဓာတ်ပုံများ- A - Proverb and Exhortations - သြဝါဒ ဆောင်ပုဒ်- High Resolution- Slideshows Knowledge Books - ဗဟုသုတ/ရသစုံ/မဂ္ဂဇင်း/ဝတ္ထု/စသည့်... News - သတင်းများ
High Resolution - Most Recent
G - General Buddhism Knowledge - ဗဟုသုတရဖွယ်အဖုံဖုံ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ၉၆၉ နှင့်...
၉၆၉ နှင့် မင်္ဂလာဂုဏ်တော်စက်ဝိုင်း အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းချက်
Tags: ၉၆၉ နှင့် မင်္ဂလာဂုဏ်တော်စက်ဝိုင်း အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းချက် 969 means and mingalar gon taw circle explanations Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / General Knowledge - အထွေထွေဗဟုသုတ ဒုစရိုက်...
Tags: ဒုစရိုက် (၁၀) ပါး Z - Maha GanDarYone Ashin Janakabivimsa - Zanakar BiWunTha - မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဗုဒ္ဓဘာသြာ...
Tags: ဘုရားဂုဏ်တော် (၉)ပါး၏ အဓိပ္ပါယ် The buddha's properties phayar gon taw9par Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / G - gar htar taw myar - ဂါထာတော်များ ဒိဝါတပတိ...
Tags: ဒိဝါတပတိ သဗ္ဗမင်္ဂလာဂါထာတော် Dhamma Photos - Dhamma Picture - Dhamma Paint - ဓမ္မဓါတ်ပုံများ ဆယ်တော်မူ...
Tags: ဆယ်တော်မူမြတ်စွာဘုရားဂါထာ Dhamma Photos - Dhamma Picture - Dhamma Paint - ဓမ္မဓါတ်ပုံများ ကျေးဇူးတေ...
ကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေဥမင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တကောသလ္လ၏ ပုံတော်
Tags: ကျေးဇူးတော်ရှင် ရွှေဥမင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တကောသလ္လ၏ ပုံတော် ShweOuMin sayardaw sayartaw P - Pagoda - SayDePaHtoeMyar - CeTiPaHtoeMyar - စေတီပုထိုးများ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ကယားပြည်န...
>>Burmese Buddhist Society, BC
Tags: ကယားပြည်နယ်၊ လွိူင်ကော် ၊ တော်ကွဲစေတီတော် P - Pagoda - SayDePaHtoeMyar - CeTiPaHtoeMyar - စေတီပုထိုးများ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ရွှေတိဂုံေ...
အခုပုံတော်ပါမြတ်ဘုရားဟာ အင်မတန် တန်ခိုးကြီးပါတယ်။
Tags: ရွှေတိဂုံစေတီတော် ထီးတော် ရုပ်ပွားတော်မြတ် shwedagon pagoda buddha image Pages: 1234of 4